eHimalayatimes | विचार/साहित्य | के एमाले मधेसबाट बढारिएकै हो त ?
23rd July | 2018 | Monday | 11:34:16 PM
के एमाले मधेसबाट बढारिएकै हो त ?
मुरारी ढुंगेल POSTED ON : Saturday, 23 September, 2017 (7:34:26 PM)
स्थानीय तह तेस्रो चरणको निर्वाचनको मतपरिणाम आउने क्रम उक्तरार्ध तिर पुगेको छ । प्रदेश नं २ का १३६ स्थानीय तह मध्ये यो समाचार तयार पार्दासम्म १११ स्थानीय तहको परिणाम घोषणा भएको छ । पहिलो र दोस्रो स्थानीय निर्वाचनमा पहिलो बनेको प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले तेस्रो चरणको स्थानीय निर्वाचनको परिणाममा अनपेक्षित रुपमा खुम्चिएको छ । एमालेको अरुले देख्ने अहमता दुई नम्बर प्रदेशले केही लच्काई दिएको हो की ? प्रश्न खडा हुन सक्छ । अब उसले मधेसवादी दल भनेर चिनिएको राजपा लगायतका दलका संविधान संशोधनका मुद्धाहरुमा पुनर्विचार गर्छ त ? बहस हुन सक्छ । तर, संविधान संशोधनको विषयमा एमाले पनि केही लचिलो भने यस अघिनै भएको यथार्थ भुल्नु हुन्न । अझ संविधान संशोधनका विषयमा एमालेले आवश्यकता र पुष्ट्याइँ खोजेको मात्र हो भन्ने उसका शीर्ष नेताहरुले पटक पटक बताएकै थिए । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले समेत संविधान गतिशिल दस्तावेज हो भनेर पटकौं भनेकै छन् । तर, व्यवहारमा कहिले देखाउने हुन् त्यो हेर्न बाकिँ छ । यसबेला संविधान संशोधनका पक्षधरले संशोधनका आवश्यकता प्रष्ट्याउन सक्नु पर्दछ ।
अन्य दलले मधेसमा एमालेलाई कम आँकलन गरेका भएपनि एमालेले भने कम्तिमा २ नम्बर प्रदेशमा ४० देखि ५० सीट जित्ने आशा राखेको थियो । प्रदेश नं २ मा एमालेले सोचे जति परिणाम आउन नसक्नुका पछाडि उसका आन्तरिक र बाह्य दुबै कारण छन् यो एमालेले पनि बुझिसकेको छ । यस अघिका निर्वाचनमा पहिलो दल बनेको एमाले भित्रको ओभर कन्फिडेन्स, पार्टी भित्रको चरम गुटबन्दी, उम्मेदवारीमा देखिएको लुच्छाचुँढी, एमाले भित्रको दम्भ, मधेसी जनता प्रति उसले हेर्ने र बेलामौलामा गरिने भाषणले एमालेको लोकप्रियता मधेसमा खस्कदै गएको नकार्न सकिन्न । यस्ता कुराको ख्याल हुनु जरुरी छ । एमाले मधेसमा हार्नुका कारण धेरै हुन सक्छन् । चुनाव भन्दा केही अघि सम्म एमाले मधेसका ८ जिल्लामा निषेधित थियो । एमाले मधेसी जनताका विरोधमा छ, मधेस विराधीको रुपमा एमालेलाई मधेस केन्द्रीत दल लगायतका राष्ट्रिय दलका शीर्षस्थ नेता सम्मले भन्न भ्याए । एमालेले यसलाई दुस्प्रचार मात्र भन्न भ्यायो, मधेसका जनता सँग गएर आफ्ना कुरा राख्न समेत सकेन अथवा पाएन ।
एमाले भित्रका गुटउपगुट लगायतका यावत कमि कमजारीले पनि मधेसमा भूमिका खेलेको हुन सक्छ । त्यसैगरी बाह्य रुपमा एमालेलाई दृश्य–अदृश्य तवरले घेराबन्दीमा पारिएको थियो । एमाले इतरका सबै दलले एकमुख लगाएर मधेसका जनतालाई एमाले मधेस विरोधी भनेर प्रचार मात्र गरेनन् एमालेलाई मत दिने जनतालाई चुनावको दिन घरमै नजरबन्द समेत गरिएको अखवारहरुमा छापिएका थिए । चुनावलाई सारेर तेस्रो चरण त्यो पनि यति समयको अन्तरालमा गरिनु पनि एमालेलाई मधेसमा बढार्ने चलखेल भित्रकै भित्रि पाटो हो । राजपा निहुँमात्र थियो भन्छन् राजनीतिकका जानकारहरु । यसैबिचमा संशोधनको विद्ययक भोटिङमा लैजानु पनि एमालाई मधेसमा पराजय गराउने अस्त्र होइन भन्न सकिन्न ।
टिकट वितरणमा देखिएको गुटगत हावीले पनि एमाले मधेसमा पराजय भोग्न विवश भयो । वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको गृहजिल्ला रौतहटमै किन एमाले पत्तासाफ हुन पुग्यो ? ०७० को संविधानसभा निर्वाचनमा दुई क्षेत्रमा विजयी एमालेले पछिल्लोपटक सांगठनिक रूपमा समेत रौतहट मजवुद थियो, भनिन्छ तर, त्यही रौतहटमा १७ स्थानीय तहको परिणाममा एमाले एक सिट पनि जित्न सकेन । बरु कोर मधेसकै रुपमा हेरिएको सिरहा, सप्तरी, धनुषा लगायतका स्थानमा एमालेका उम्मेदवारले सम्मान जनक रुपमा विजयी भएका छन् । राजमार्ग क्षेत्रमा समेत एमाले घेराबन्धीमा परेको छ ।
रौतहटमा वरिष्ठ नेता नेपालसहित जिल्लावासी केन्द्रीय सदस्य डा.वंशीधर मिश्र, सरला यादव, कल्याणी खड्का, लालबाबु यादव, रामकुमार भट्टराई र जिल्ला अध्यक्ष कमल राय यादवलगायत केन्द्रीय नेता चुनावी दौरानमा खटेका भएपनि परिणाम उल्टो हात लाग्यो ।
उम्मेदवारी मनोनयनको अघिल्लो दिन एमाले केन्द्रीय कार्यालयले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा चन्द्रपुर नगरपालिकाको मेयरमा बाबुराम दाहाल उम्मेदवार भनेर सार्वजनिक गरियो । तर, दाहाल उम्मेदवारी दर्ता गराउन जाने बेला एमालेकै उद्धव रेग्मीले उम्मेदवारी दर्ता गराइसकेका थिए । दुवैको उम्मेदवारीमा एमालेका २ नम्बर प्रदेश संयोजक सत्यनारायण मण्डलकै हस्ताक्षर थियो । त्यति बेलै एमाले भित्रको चरम गुट उपगुटको पर्दाफास भईसकेको थियो । अझ धेरैले त चन्द्रपुर नगरमा एमालेको हार भइसक्यो भनेर भन्न पनि भ्याएका थिए ।
एमाले सांगठानिक रुपमा बलियो छ । एमाले बराबरको संगठन अन्य दलमा देखिन्दैन । तर पनि एमाले विगतका धेरै चुनावमा पहिलो दल हुन सकेको छैन । अब मंसिरमा प्रदेश सभा र प्रतिनिधी सभाको निर्वाचनको मिति तय भइसकेको छ । मधेसी दलले उठाएका मधेसी जनताका हितका मुद्धा, समग्र जनताले एमाले प्रति आश राखेका राष्ट्रियताका मुद्धा लगायतका विषयको बीचमा रहेर यसको निर्योल एमालेले गर्न सक्नुपर्दछ । यसलाई एमालेले गहन रुपमा लिएर मंसिरको चुनाव अघिनै एमाले संविधान संशोधनको पक्ष वा विपक्षमा भन्ने कुरा टुंग्याउन सक्नु पर्दछ । एमाले भित्रका कमिकमजोरी र गुट उपगुटलाई हत्तोत्साही गर्नु पर्छ भन्छन् यसका शुभ चिन्तकहरु ।
मधेसका जानकारहरुको भनाईलाई लिने हो भने केही दलका शीर्ष नेताले एमालेलाई मधेसबाट बढार्ने उद्घोष गर्दथे त्यसरी एमाले मधेसमा बढारिएन, उल्टै भित्रि मधेसका रुपमा चिनिएका स्थानमा एमालेले बलियो उपस्थिति जनायो, मधेस आन्दोलनको उद्गम स्थल लहान लगायतका स्थानीय तहमा जित्दै एमालेले आफ्नो साख जोगाएको बताउँद छन् ।